FILOHA RAVALOMANANA : TSY MAINTSY ATAONTSIKA IZAY HAMPANDROSOANA NY FIRENENA – MyDago.com aime Madagascar
FILOHA RAVALOMANANA : TSY MAINTSY ATAONTSIKA IZAY HAMPANDROSOANA NY FIRENENA
Tsy ankijanona ny hetsika fitetezam-paritra amin’ny fampielezan-kevitra tanterahan’ny kandida Robinson izay natolotry ny movansy Ravalomanana sy ny Avana, ho amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 25 oktobra izao. Tany Ambato boeny, Maevatanana, Namakia, ary Mahajanga androany Zoma 11 Oktobra 2013 no nanohizan’izy ireo izany hetsika izany. Miavaka hatrany tsy toy ireo kandida sasany ny kandida natolotry ny movansy Ravalomanana sy ny Avana satria dia ireo toerana izay nolalovany dia vory marobe ireo olom-pirenena feno 18 taona, manatrika ny hetsika, ary te hahita mivantana an’i Neny sy te haheno ny filoha Ravalomanana izay tsy mitsahatra miditra mivantana amin’ny antso an-telefaonina isaky ny hetsika fampielezan-kevitra ataon’ny kandida Robinson. Tsy misy T-shirt, sy fizarana vola tahaka ny ataon’ny hafa kanefa dia liana hatrany ny vahoaka mihaino ny kabary, na ireo lazaina fa maro an’isa nangina aza dia tonga manatrika ny hetsika. Mitazona hatrany ny fahendrena izay hananany nandritra izay efataona mahery izay, ireo vahoaka mpiaradia amin’ny filoha Ravalomanana, satria nandritra izay fampielezan-kevitra izay dia tao anatin’ny filaminana tanteraka no nanatanterahana izany. Tao Ambato Boeny no nanombohana ny fampielezan-kevitra androany, nitohy tao Maevatanana, nihazo an’i Namakia ary nofaranana tao Mahajanga izany. Nisy hatrany ny kabary nifandimbiasana tamin’ireo toerana rehetra ireo. Ny filoha Ravalomanana izay niditra mivantana amin’ny antso an-telefaonina dia nanamafy hatrany ny antony nanohana ny kandida Robinson. Efa niara niasa tamiko tao anatin’ny governemanta izy hoy ny fanazavany tamin’ny vahoaka tany an-toerana, ka fantatro tsara fa izy no hahavita azy. Nanentana ny vahoaka ihany koa izy hifidy ny kandida Robinson. Fidio ny kandida favori fa izy no hampody ahy hoy izy ary tongava daholo mifidy, entano ny manodidina hifidy amin’ny 25 oktobra izao.Tao Namakia manokana dia nambaran’ny filoha Ravalomanana fa hojerena ny lafiny fampianarana sy ny mpampianatra, hatsaraina ary hampitomboina ny tobim-pahasalamana any an-toerana satria mijaly ny vahoaka.Tsy maintsy ataontsika izay hampandroso ny firenena. Neny kosa dia namerimberina tamin’ny vahoaka fa manana vahoaka hendry isika, ka noho izany dia entintsika ambavaka ny kandidantsika.Mivavaha ka aza mitsahatra hoy izy fa ny vavaka no manova zavatra. Nanao fanentanana ny amin’ny tokony handehanana hifidy ny tenany ka ny dokotera Robinson no fidiana hoy izy. Ny kandida Robinson kosa dia nanambara fa tsy avela hisy fery vaovao intsony eto amin’ny firenena. Tonga aho hoy izy hitsabo ny firenena. Tsy mitsahatra hatrany ihany koa ny tenany ny manazava ny vahoaka ny fandaharan’asany entina hampandrosoana ny firenena rehefa lany ho filoham-pirenena ny tenany. Tao Ambato Boeny dia nampanantena ny kandida Robinson fa hamboarina ny làlana ao an-toerana ary hananganana orinasa manamboatra voatabia hahafahan’ny tanora miasa. Ho an’ny tao Maevatanana kosa dia nambarany fa hakarina ny vidin’ny volamena mba hahafan’ny mponina mivelona sy miaina.Io fotoana io ihany koa no nanararaotan’ny kandida Robinson nanazavana ny bileta tokana indrindra ny laharana faha 33 misy azy. Tao Mahajanga no namaranana ny fampielezan-kevitra ka nadia somary efa hariva aza ny andro dia tonga maro hatrany ny vahoaka. Filaharam-be niaraka amin’ny horakoraka syhafaliana no nitsenan’ny vahoaka tao Mahajanga ny delegasiona, ny kandida Robinson , niaraka amin’i Neny sy ireo mpiradia aminy. Niainga tao ami’ny seranam-piaramanidina Amborovy ny filaraham-be ka nihazo ny toerana hanatanterahana ny hetsika.
HETSIKA TAO MAHAJANGA
HETSIKA TAO NAMAKIA
HETSIKA TAO AMBATOBOENY
HETSIKA TAO MAEVATANANA
Filoha RAVALOMANANA : “Fantatro izay mahasoa ny vahoaka”
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 octobre 2013 11 octobre 2013 Catégories Politique
4 réflexions sur « FILOHA RAVALOMANANA : TSY MAINTSY ATAONTSIKA IZAY HAMPANDROSOANA NY FIRENENA »
HOAN IREO MPANAO PROPAGANDE ,ADY NO HATREHANA HAMPANDROSOANA ITY FIRENENENA SY NY MPONINY ITY .
Ka ny Lahateny hatao aoka mba hahery vaika hifandanja @ asa mafy izay hatao ,hanentana ny vahoaka ,hanazava azy ny zava doza vitan ny foza nandritra izay dimy taona izay.
Izao no mba zavatra vitan’ny foza !
Itony mba ataovy kôpia ho hitan’ny zanaka sy fara aman-dimby ny rediredin’ireto foza !
Mba tonga saina ve ireto be fanakianina ireto amin’izao fotoana izao, sa dia mbola miaro mafy an’ireto jiolahy ?
Ataovy tsara tahiry, ary jereo tsara ny dian’ny bala ery amin’ny FITARATRA SY RINDRINA IZAY TSY TOKONY HO VOAN’NY BALA, SATRIA OLONA IRAY IHANY ( GARDE PRESIDENTIELLE ) NO NANAO TIFITRA AMIN’NY TANY !
Ny voalazan’i Sarla moa dia efa niaraha-mahafantatra daholo !
Fa mba fantatrareo ve ilay vehivavy nanao ny commentaire ? Feon’iza ?
Ho an’ilay dondrom-bavy zanam-poza, ny hery resahin’ny Filoha Ravalomanana dia ny fitiavan’ny vahoaka malagasy azy !
Rehefa dondrona moa dia dondrona mandrak’izay ! Ny toetra mety azo ahitsy, fa ny havendranana sy ny haratsiam-panahy mety manaranaka mihitsy !
7 fevrier est le fond de commerce de non seulement de Rajoelina ,de RFi mais aussi du quai d orsay.
hoy i Menja ao sit tiako i madagasikara .
O ry Dada a !
Mba amafiso ny tetika izay novolavolaina tao amin’ny MAP fa FANDRIKA BE ho an’ny tantsaha izany resaka micro-credit ho an’ny tantsaha izay anaovan’ny sasany propagandy io !
ASA NA Atoa Ravalomanana no ny fanazavana ny Map na i Atoa Robinson jean luois ?
Précédent Article précédent : HANAMPY ANTSIKA NY MPAMATSY VOLA
Suivant Article suivant : ANDIAN-TSARY FAMPIELEZAN-KEVITRA TAO ARIVONIMAMO